မှတ်မှတ်သားသား စားဖွယ်များ – ရန်ကုန် – မန္တလေး – စစ်ကိုင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » မှတ်မှတ်သားသား စားဖွယ်များ – ရန်ကုန် – မန္တလေး – စစ်ကိုင်း	41
မှတ်မှတ်သားသား စားဖွယ်များ – ရန်ကုန် – မန္တလေး – စစ်ကိုင်း
Posted by ဇီဇီ on Mar 25, 2015 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, My Dear Diary, Travel | 41 comments
ဒီ တခေါက် ပြန်တော့ အလုပ်က ဘော့(စ) ကပါ ရန်ကုန်ပရော့ဂျက် အတွက်လိုက်ချင်တယ်တဲ့။
ဟိုတယ် ကို စီစဉ်ပေးနိုင်ပေမဲ့….
ကိုယ့် အစစ်စတန့်ကောင်လေး ရောရယ်က အစားအသောက် နည်းနည်း ချေးများတဲ့ထဲ ပါတာမို့ အတော် ခေါင်းခဲပါတယ်။
မြန်မာ စာလည်း မစားချင်တဲ့သူနဲ့ အစားရွေးတဲ့သူနဲ့၊ ဆိုင် အပြင်အဆင်က အစ ကြည့်တတ်တဲ့ သူတွေမို့ ကိုယ့် တိုင်းပြည်ထဲလည်း မျက်နှာမပျက်ချင်တာ ပါတာပေါ့။
ပထမရက်မှာ ဟိုတယ် သွားတွေ့ပြီး နေ့လည်စာကို ဘယ်မှာကျွေးရမယ်လို့ ခေါင်းခြောက်ပါပြီ။
အဲဒါနဲ့ စဉ်းစားရ အလွယ်ဆုံး နဲ့ ဟိုတယ်နဲ့ အနီးဆုံး ပန်းဘဲတန်း မြို့နယ် FMI (ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ဈေး ဘေး)၊ က Ya Kun Kaya Toast ကိုပဲ ခေါ်သွားလိုက်တယ်လေ။ စလုံးက လာဖွင့်တဲ့ ဆိုင်မို့ ဒီ တစ်နပ်ကို နည်းနည်းမှ နားညည်းသက်သာသက်သာပေါ့နော့။
FMI ရဲ့ အောက်ဆုံး အထပ်မှာ ရှိပါတယ်။ ဝိုင်ဖိုင်ရောရ၊ အအေးခန်းထဲ ထိုင်ချင်လည်းရ၊ အပြင်မှာ စီးကရက်သောက်ရင်းထိုင်ချင်လည်း ရတဲ့ နေရာမို့ ထိုင်ရ အဆင်ပြေသလို အစားအသောက်ကလည်း စလုံး စတိုင် အုန်းထမင်း၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ၊ ပေါင်မုန့်မီးကင် နဲ့ ကော်ဖီ လက်ဖက်ရည်ကောင်းကောင်း ရတာကြောင့် လွယ်လွယ်ကူကူ ဆုံးဖြတ်ပြီး စားလို့ရတဲ့ ဆိုင်လေးပါ။
ညစာတော့ ဟိုတယ်နဲ့ နီးတဲ့ ပန်းဆိုးတန်း ဆိပ်ကမ်းက JUNIOR DUCK RESTAURANT မှာပဲ ကျွေးဖြစ်တယ်။
ကိုယ်ကလည်း ကိုယ့် စိတ် အနာနဲ့ကိုယ်။ ပထမတစ်ခေါက် ကိုယ်မပါပဲ လာပြီး စလုံးပြန်ရောက်တော့ “ရန်ကုန်မှာ ဘဲကင် စားလို့ မကောင်းဘူး” ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်ကို စိတ်ထဲမှာ မှတ်ထားမိတာ။
အဲဒါကြောင့် ဆိုင်ရောက်တော့ မပါမဖြစ် ဘဲကင်လေးရယ်၊ ကျန်တဲ့ ဟင်း သိုင်းသိုင်းဝိုင်းဝိုင်းမှာပေးလိုက်တော့ “ဒီ ဘဲကင်ကျ မဆိုးဘူး၊ စားလို့ ကောင်းတယ်” ဆိုတဲ့ အသံထွက်လာတယ်။ ကျေးဇူးပါ ရွှေဘဲ ရေ။ ဆိုင် အရတော့ တခြား ရွှေဘဲ ဆိုင်ခွဲတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ဒီ ဆိုင်အပြင်အဆင်က သိပ်မကောင်းလှဘူးး။
ဈေးနဲ့ အရသာအရ မဆိုးတဲ့ အပြင် ဝန်ဆောင်မှုလေးလည်း ကောင်းတာမို့ စိတ်အေးလက်အေး ခေါ်သွားလို့ ရတာကို ကျေးဇူးတင်ရပါသေးတယ်။
တခြား ရွှေဘဲဆိုင်တွေကတော့ လိပ်စာက အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်ဟင်း အရသာရှိရှိစားချင်ရင်၊ နေရာထိုင်ခင်းသန့်တာ သွားချင်ရင် သိပ်စဉ်းစားစရာ မလိုလို့ သဘောကျပါတယ်။
(Credit to Black Chaw)
၁။ ရွှေဘဲ စားသောက်ဆိုင်
အမှတ်.၂၂၄၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ရန်ကုန်။
ဖုန်း – 241234, 372603, 389764
၂။ JUNIOR DUCK RESTAURANT နန်းသီတာ အဆောက်အဦ အပေါ်ထပ်-အောက်ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း- 249421, 098614554 , 09421144660
၃။ ရွှေဘဲ (ရှစ်မိုင်) စားသောက်ဆိုင် GOLDEN DUCK (Junction – Restaurant၊
ပြည်လမ်း (၈ မိုင် လမ်းဆုံ)၊ မြိုင်ဟေ၀န်ပန်းခြံ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း – 0986 17477 , 0973 355733 , 0973355755
၄။ GOLDEN DUCK (Kan Taw Min) Restaurant
ဖုန်း – 240216, 09 7322 9233, 706488
၅။ GOLDEN DUCK (Sayarsan) Restaurant Tel – 0973163366, 73163377, 73163388
၆။ သင်အာ စားသောက်ဆိုင်
No. ၃၀၉, ကျုံးကြီးလမ်း, ဝါးတန်းလမ်းနဲ့ ၄လမ်းကြား, ရန်ကုန်မြို့။
Tel – 221854, 222660
နောက်ရက် နေ့လည်စာတော့ မဖြစ်မနေ မြန်မာစာကို ဇွတ်ကျွေးမယ်လို့ မောင်းတင်ထားပြီး မြန်မာဆိုင်ကို စဉ်းစားရပါတယ်။
အဲဒီနေ့ ညနေပဲ ပြန်တော့မှာဆိုတော့ မနက် သန်လျင်မှာ အစည်းအဝေးအပြီး လေဆိပ်ကို ကူးရင် ခေါ်သွားနိုင်မဲ့ နေရာကို ဟိုမေးဒီမေးလှမ်းမေးရတော့ ဝေဇယန္တာလမ်းပေါ်က ဂန္ဓမာ (Whole Sale) ဟိုးဆေး နားက ခိုင်ခိုင်ကျော် ကို ညွှန်းကြပါတယ်။
ကိုယ့် အနေနဲ့ဆို မြို့ထဲက လှည်းတန်း စံရိပ်ငြိမ် မှတ်တိုင်နား၊ အင်းစိန်လမ်းမပေါ်က ဓနုဖြူဒေါ်စောရီ များ ကျွေးရမလား စဉ်းစားမိတာလေ။ ဒေါ်စောရီက အသားဟင်းကောင်းတယ်၊ ငပိထောင်းကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ ကားရပ်ဖို့ မပြေလည်လောက်ဘူးလို့လည်း စဉ်းစားမိတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ ခိုင်ခိုင်ကျော် မှာ ကိုယ်လည်း မစားဖူးတာနဲ့ သွားမယ် ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ကားရပ်ဖို့ နေရာ အဆင်ပြေတယ်။
ပြီးတော့ သပ်ရပ်တဲ့ နေရာထိုင်ခင်းနဲ့မို့ ပထမ အမြင်မှာတင် စိတ်အေးသွားရတယ်။ ဘာမှာချင်လဲ မေးတော့ စားကောင်းမဲ့ မြန်မာဟင်းတွေ ကိုယ့်ပဲ မှာခိုင်းတာနဲ့ ဟင်းစပ်တည့်အောင် ကြိုးစား မှာရတော့တာပေါ့။
ကြက်သား၊ ကုလားပဲ ဟင်းရယ်၊ ငါးဖယ်သုပ်ရယ်၊ အာလူးအကျွပ်ကြော်ရယ် ပုဇွန်ထုတ်ကြော်ရယ် (တစ်မျိုး ကို ၂ ပွဲစီ) မှာပြီး ငပိရည် တို့စရာ အစုံ နဲ့ မန်ကျည်းရွက်ချဉ်ရည် က ချထားပြီးသားဆိုတော့ ပြည့်စုံပြီ ယူဆပြီး စတင်စားသောက်ပါတယ်။
ဘေးနားမှာ ဘာလိုလဲ လာလာကြည့်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလေးနဲ့ စိတ်ချမ်းသာသာစားရတာမို့ ကိုယ်သာမက သူတို့ ၂ ယောက်လုံးပါ ထမင်း ၃ ခါစီ ယူတဲ့ စံချိန်နဲ့ နေ့လည်စာလေးပေါ့။
စားပြီး အချိုတည်းဖို့ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ ထန်းလျက်ခဲတို့ ပဲကြမ်းကြော်တို့ကလည်း အဆင်သင့်လေ။ ဒီဟင်းတွေနဲ့ ၂သောင်း ခွဲ လောက်ပဲ ကျတာမို့ ဈေးနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ တန်တယ်လို့ပဲ ပြောပါရစေ။
စားပြီးတော့ ဘေးနားကပ်ရက်က Moon Bakery မှာ ကော်ဖီတိုက်လိုက်သေးတယ်လေ။ အဆင်တပြေနေရာလေးမို့ နောက်တစ်ခေါက်လည်း သွားစားမယ်လို့ ကြံစည်ထားတယ်။
ရန်ကင်းက ဘောက်ထော် ကျောက်ကုန်း နားက သပြေရိပ် မှာ မြန်မာမုန့် မျိုးစုံ မနက်ခင်းပိုင်း ရတာမို့ စားချင်သူတွေ အတွက် ညွှန်းလိုက်ပါတယ်။
အမတ်မင်း ဝယ်ကျွေးတာ။ ငိငိ
တောင်ဥက္ကလာ စာတိုက်လမ်းဆုံ ရဲစခန်းနားက Feel မှာလည်း မြန်မာမုန့် မျိုးစုံနဲ့ မြန်မာ ထမင်း ဟင်း မျိုးစုံရနိုင်ကြောင်း လည်း စားရင်း သွားရင်း သိခဲ့ရရပါသေးတယ်။
Feel ရော သပြေရိပ်ရောက ဆိုင်ခွဲတွေ အများကြီးရှိပါတယ်တဲ့။ ဒါက ကိုယ် ရောက်တဲ့ ဆိုင် တွေကို ပြောပြတာပါ။
ဒါတွေက ရန်ကုန်က အစားအ သောက် ဇာတ်လမ်းတွေပေါ့။
ရန်ကုန်က အစားအသောက်က သူ့ရှေ့မှာ မို့ ဓာတ်ပုံမရိုက်ခဲ့ပါဘူးး
မန်းလေးက အစားအသောက်ကိုတော့ တိုတိုနဲ့ လိုရင်းပဲ ညွှန်းပါရစေ။
ဓာတ်ပုံတွေရော ပါမှာ မို့လို့ပါ။
ဆိုင် – အိုင်ဘား
လိပ်စာ – ၆၅ လမ်း၊ ၂၆လမ်း နှင့် ၂၇ လမ်းကြား
ရရှိနိုင်တဲ့ အစားအစာ – အနောက်တိုင်း အစားအစာ၊ ယိုးဒယားအစားအစာ၊ မြန်မာ အစားအစာ
မန်းလေးမှာ ဖွင့်တာမကြာသေးပေမဲ့ နာမည်ရလာတဲ့ ဆိုင်တစ်ခုပါ။ ပိုင်ရှင်က ဂျေဂျေ ကဖေး ပိုင်ရှင်နဲ့ အတူတူပဲလို့ ကြားပါတယ်။ ကိုယ် ကြိုက်တာက ဆိုင်ရဲ့ အဆင်အပြင်ပါ။
အတွင်း ပြင်ဆင်မှုရော၊ အပြင်ပိုင်း ပြင်ဆင်မှုပါ တော်တော်လေး သပ်ရပ်ခန်းနားပါတယ်။
နေရာကျယ်ကျယ်မို့၊ အတွင်းမှာ ထိုင်ချင်လည်းရ၊ အပြင်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်ချင်လည်း ရတဲ့ ဆိုင်ပါ။ ကားပါကင် အတွက်ပါ အဆင်ပြေတာမို့ အချိန်တို အတွင်း လူကြိုက်များလာတာလည်း ပါမှာပါ။ အစားအသောက် အရသာ ကောင်းပြီး ဈေးကတော့ နည်းနည်းကြီးတဲ့ထဲ ပါပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်းက မိသားစု အတွက်လည်းသင့်တော်ပါတယ်။
ဆိတ်အကြောကို ခါးပတ်ချက်ချက်တာ ဆိုလားး အတော်စားလို့ကောင်းတယ်။
ဆိုင် – Life Cafe
လိပ်စာ – ၂၉ လမ်း၊ ၇၂ လမ်း နှင့် ၇၃ လမ်းကြား
အိုင်ဘားလိုပဲ ဘာမှာမှာ ရတဲ့ ဆိုင်ပါ။ ကားပါကင်နေရာခက်ပေမဲ့ လူရှင်းတဲ့ အချိန် ကော်ဖီသောက်ချင် တစ်ခုခုစားချင်စိတ်ရှိရင် ဝင်ထိုင်လို့ အတော်သန့်ပြန့်တဲ့ ဆိုင်မို့ ညွှန်းပါရစေ။
ဈေးကလည်း အိုင်ဘားထက်သက်သာပါတယ်။ အရသာကောင်းတယ်။
ဆိုင် – ဝိုင်ကေကေအို
လိပ်စာ – လမ်း ၃၀၊ ၆၄လမ်း နဲ့ ၆၅ လမ်း ကြား
ရရှိနိုင်သော အစားအသောက် – အကင်၊ဆာတေး၊ ကြေးအိုး၊ ဆီချက် နဲ့ ကော်ဖီ
ဟုတ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်က ရန်ကင်းကြေးအိုးရဲ့ ဆိုင်ခွဲပါ။ ဖွင့်ထားတဲ့နေရက ခြံဝန်းကျယ်ထဲက ဘန်ဂလိုလေး တစ်ခုကို အပြင်အဆင် ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ဖွင့်ထားတာမို့ အေးဆေးထိုင်ချင်သူတွေ၊ ကားပါကင်စိတ်အေးချင်သူတွေ အတွက် ထိုင်လို့ ကောင်းတဲ့ နေရာလေးပါ။ သူငယ်ချင်း အုပ်စုတွေ တော်တော်များများထိုင်ကြပါတယ်။ အစားအသောက်လက်ရာ ကောင်းတဲ့ထဲပါသော်လည်း ဝန်ဆောင်မှု ရာခိုင်နှုန်းထပ်ပေါင်းထားတဲ့ ဈေးနှုန်းကြောင့်မို့ ကိုယ် ကတော့ ဈေးကြီးတယ် သို့သော် သွားပျော်တယ် လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
ဆိုင် – ရွိုင်ရယ် မန္တလေး (Royal Mandalay)
လိပ်စာ – ၃၂ လမ်း၊ ၆၈ လမ်း နဲ့ ၆၉ လမ်းကြား
ရရှိနိုင်တဲ့ အစားအသောက် -အရှေ့တိုင်း၊ အနောက်တိုင်း အစားအသောက် မျိုးစုံ၊ အဖျော်ယမကာမျိုးစုံ
ဟိုတယ်လော်ဘီ ခန်းမကျယ်တစ်ခုလို အပြင်အဆင်နဲ့ ဧည့်ကြို ဝန်ထမ်းများ ရှိလို့ သက်တောင့်သက်သာထိုင်ချင်တဲ့ ဧည့်သည်မျိုးနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ တိတ်ဆိတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မို့ စိတ်အေးလက်အေး စကားပြောချင်ရင် ကော်ဖီသောက်ချင်ရင်လည်း ထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဟင်းအရသာကောင်းသော်လည်း ဟင်းတစ်ခွက်မှာ ပါဝင်နှုန်းပမာဏ မဆိုစလောက် နည်းပါတယ်။ ဈေးနည်းနည်းများပါတယ်။
ဒါက ဒီ တစ်ပုံပဲ ရှာတွေ့တော့တယ်။ပုဇွန်ထုတ်ချက်ရယ်ကြက်ချဉ်စပ်ရယ်ကိုက်လန်ကြော်ရယ်။
ဆိုင် – ယမုံနာ
လိပ်စာ- လမ်း ၆၀၊ ၂၄ လမ်း နဲ့ ၂၅ လမ်းကြား
ရရှိနိုင်တဲ့ အစားအသောက် – ကချင်စကောထမင်း၊ဟင်း၊ တိုင်းရင်းသားရိုးရာဟင်း တစ်ချို့
ကိုယ် ဒီ တစ်ခေါက်ရောက်ဖြစ်တဲ့ထဲ အကြိုက်ဆုံး ဆိုင်ပါ။ စကောထမင်းတစ်ဝိုင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ ဟင်းတွေက တစ်ရက်တစ်ရက် နည်းနည်းစီကွဲပြားသွားတာပါ။ ကိုယ်ရွေးလို့မရပါဘူးးး၊ ဆိုင်က သူ့ ပွဲနဲ့သူပြင်ပေးတာမျိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ ဟင်းတိုင်း ဟင်းတိုင်း အရသာက အထူးကောင်းမွန်တာရယ် ဆန်/ထမင်းအနေအထား စိတ်ကြိုက်ကောင်းမွန်တာရယ်၊ တခြား အရသာရှိတဲ့ ရိုးရာဟင်းတွေ ရနိုင်တာရယ်၊ ရိုးရာ ဆန်တဲ့ ဆိုင်ရဲ့ အပြင်အဆင်ရယ်ကြောင့် သွားသင့်တဲ့ စားသင့်တဲ့ မန်းလေးက နေရာတစ်ခုပါ။ ဇကောထမင်းတစ်ဝိုင်းကို ၂၅၀၀၀ ကျပ် ရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့ သီးစုံဖျော်ရည်ကြိုက်ရာမှာလို့လည်း ရတာမို့ တစ်နပ်စာလောက်တော့ ကြိုးစားပြီး သွားစားသင့်တယ်လို့ ပြောပါရစေ။
ဆိုင် – ကုက္ကိုကျွန်း
လိပ်စာ – မန်းလေး ကန်တော်ကြီး ရရှိနိုင်တဲ့ အစားအသောက် – အရှေ့တိုင်း၊ အနောက်တိုင်း အစားအသောက် မျိုးစုံ၊ အဖျော်ယမကာမျိုးစုံ
စလုံးမလာခင်ကတည်းက ပွေးနေကြ၊ ထိုင်နေကျ ဆိုင်ပါ။
ကြိုက်တာက ဝိုင်းလေးတွေ တိုင်းကို ကန်စပ်မှာ ထားတာရယ်၊ အထဲမှာ မစားချင်ပဲ အပြင်မျက်ခင်းပြင်မှာ သာသာ ယာယာ စားလို့ ရတာရယ် ကြိုက်ပါတယ်။
လက်ရာကောင်းတဲ့ထဲ ပါပြီး နေရာထိုင်ခင်း သဘာဝကျတာမို့ ဒီထဲကို ပေါင်းဖြည့်ခဲ့ပါတယ်။
ငါးခေါင်း မျှစ်ချဉ် အရည်သောက်
စားနေကျ “သူဇာ စားသောက်ဆိုင်” မှာပဲ စားဖြစ်တယ်။
လိပ်စာက – စစ်ကိုင်း-ရွှေဘို-မုံရွာ လမ်းမကြီးဘေး၊ ရွာထောင်ရပ်၊ စစ်ကိုင်းမြို့ တဲ့။
ရနိုင်တဲ့ အစားအသောက်တွေက တရုတ်-မြန်မာ အစားအစာသီးသန့် တဲ့။
၂ တန်း လောက် စစ်ကိုင်းမှာ နေတုန်းကတည်းက တစ်မျိုးလုံးစားတာဆိုတော့ ဘယ်လောက်ကြာပြီတုန်း စဉ်းစားသာကြည့်တော့။
လက်ရာကလည်း ကျမသွားဘူးး ကောင်းတုန်းပဲ။
အကြိုက်ဆုံး ဟင်း ၂ ခွက်ပဲ ရိုက်လာတယ်။
တောင်ပေါ်သား says: အိုင်ဘား က ဟင်းပုံနဲ့ ကုက္ကိုကျွန်းက ဟင်းပုံတွေက တူနေတယ် ၊
ခင်ဇော် says: ဓာတ်ပုံတွေ ရောပြီး မှားထည့်။
Crystalline says: ​မြေနီကုန်းရှင်​​စောပု ကားရပ်​နားကွင်းမှာလည်း ဓနုဖြူ​ဒေါ်​စောရီရှိတယ်​… ကျယ်​ဝန်းပြီး… ကားရပ်​ဖို့အဆင်​​ပြေတယ်​… အရသာက​တော့ နျုင်​ငံခြားသားကြိုက်​… ​ပြောရမလားပဲ… ခပ်​​ပေါ့​ပေါ့… ​နေရာ​တော့ ​တော်​​တော်​​လေးသန့်​တယ်​… :-)
ခါးပတ်​​ကြော်​​တော့ စားအုန်းမယ်​… မ​ကြော်​တာစားဖြစ်​တာကြာလှမို့…
ခင်ဇော် says: လှည်းတန်းက ဒေါ်စောရီတောင် ဟို ၃ ယောက်ခေါ်လို့ ရောက်ဖူးတာ။
Mike says: .ဘဲကင်တကယ်စားကောင်းတာကတော့ သခင်မြပန်းခြံနားက Western Park ပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: အယ်။
ရန်ကုန်မှာ သများ ဘာမှ မသိဘူးးး
ကထူးဆန်း says: သူက ပီကင်း ဘဲ ကင် ဆိုပြီး ပီကင်း က စတိုင် ထုတ် တာ ..
ဘဲ ကင် အကောင် လိုက် အရင် လာပြ ။ပြီးမှ ပြန်ယူသွား အသား နွှင်။ အရိုးက ဘာလုပ်မလဲ မေးတယ် ။ များသောအားဖြင့်တော ကြံမဆိုင် နဲ့ဟင်းချိူ လုပ်ခိုင်းကြတာ များတယ် ။
လွှာထား တဲ့ ဘဲကင်ကို ဂျုံ ပြား နဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်နဲ့ လိပ်စား ။။ ဆော့ က လည်း မြန်မာပြည် ဘဲကင် ဆော့ တွေ နဲ့ မတူဘူး ပေါ့ ။
ခင်ဇော် says: မှတ်ထားလိုက်ပြီ။
Foreign Resident says: မှန်တာ ပြောရရင် အဘ က ဘဲကင် မစားဘူးရယ် ။
အဘ က အသား တစ်မျိုးထဲ သန့်သန့်မှ စားလို့ မျိုကျတာ ။
အသားမှာ အဆီ ၊ အရေခွံ ၊ အရိုး ၊ အရွတ် တွဲနေရင် မစားဘူး ။
အဲဒီတော့ ရွှေဘဲ စတိုင် ဘဲကင် တစ်ကောင်လုံးကို ခုတ်ပိုင်းလာရင် မစားဘူး ။
Western Park ကလိုမျိုး အရိုးဖယ် အသား နွင်ပြီးသား ၊
လွန်ရော ကျွံရော အရေခွံ လောက်ဘဲ ဖယ်ရယုံရှိတဲ့ ဘဲကင် အသားတုံး ကို ၊
ဂျုံ ပြား နဲ့ ကြက်သွန်မြိတ် နဲ့ လိပ်စား ရတာကိုတော့ စားလို့ရတယ် ။
ဒါကြောင့် အဘကတော့ Western Park က ဘဲကင် ကို ပိုကြိုက်တယ် ။
( လိုရင်းက အဘ သပ်သပ် ထပ် နွှာစရာ ဖယ်စရာ မလိုတော့လို့ )
kai says: ကထူးဆန်းယူအက်စ်လာဖြစ်သလားမသိ…။
လာဖြစ်ရင်.. အယ်လ်အေကနာမယ်ကြီးဘဲကင်ဆိုင်အနည်းဆုံး ၂ဆိုင်မှာလိုက်ကျွေးမယ်…။
ဘဲကင်ဆို.. အရိုးနုအထိ.. ကိုက်စားရမှကြိုက်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ကျနော် ကိုက်ပြီးသား အရိုးဆို
တောင်ပေါ်သား says: သများတို့ကတော့ MICT Park နားက တစ်ခါပြင် ၈၀၀ ထမင်းဆိုင်နဲ့ လှိုင်မင်းက ၂၀၀ တန် လဘက်ရည်လောက်ပဲ ကျွမ်းပါတယ်ကွယ် ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
မန်းလေးမှာ ပုံစားထမင်း တွေ အကြောင်း သတ်သတ်ရေးအူးမှာ။
Foreign Resident says: ” ဝေဇယန္တာလမ်းပေါ်က ဂန္ဓမာ (Whole Sale) ဟိုးဆေး နားက ခိုင်ခိုင်ကျော် ကို ညွှန်းကြပါတယ် ”
အဘတို့အိမ်က အဲဒီ ဝေဇယန္တာ က ခိုင်ခိုင်ကျော် ကနေ ချိုင့်ဆွဲစားနေတာလေ ။
လူ တစ်ယောက်စာ တစ်လ ကို ၁၄၀,၀၀၀ ကျပ် တဲ့ ။
အသားဟင်း ၂ နပ် ၊ သီးရွက်ကျော် ၊ ဟင်းချို နှင့် ငပိရည် တို့စရာ ပါတယ် ။
အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေ ဆိုတော့ အစားနည်း ၊ ချွေတာစားကြတော့ ၊
အဘတို့အိမ်သား ၃ ယောက် ကောင်းကောင်း လောက်ပါတယ် ။
ဟီ ဟိ ၊ အဲဒီ စားတဲ့ အိမ်သား ၃ ယောက် ထဲ အဘ မပါဝူး ၊
အဘ က အပြင်မှာဘဲ Feeling လာသလို ကြုံတဲ့ဆိုင် ဝင်စားလိုက်တာဘဲ ။
ဟီ ဟိ ၊ အစားအသောက် ကိစ္စ ဆိုလို့ ၊
့ပြီးခဲ့တဲ့ အပါတ်ထဲမှာ သွားစားဖြစ်ခဲ့တာတွေ ပြောရဦးမယ် ။
Junction Square ရဲ့ Car Parking အပေါ်ဆုံး ထပ်မှာ ၊
Secret Garden ဆိုပြီး ဆိုင်သန့်လေးတွေ စုဖွင့်ထားတာ အသစ် ရှိတယ် ။
အဲဒီက Sha Bu Ki ဆိုလား ဘာလား Japan ဆိုင်မှာ ၊
Sushi Train နှင့် ဂျပန်စာ ဘူဖေး ရတယ် ။
၆ လက်မလောက် ရှိတဲ့ ပုဇွန် တန်ပူရာ တောင် ပါသေး ။
အချိန် ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ် ကို ၁၅,၀၀၀ ကျပ် ကျတယ် ။
ဂျပန်စာ ဘူဖေး ဒီဈေး နှင့်ရတယ် ဆိုတော့ မဆိုးဘူး ။
အမယ် ၊ ဒေါင့်နားမှာ Mediterranean စာတွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်ပါ ရှိသေး ။
အဘ Europe ခရီးစဉ်တုန်းက Barcelona မှာစားခဲ့တဲ့ ၊
စပိန်စာ Paella ပါ ရတယ်လို့ ကြေငြာထားသေး ။
အဲဒီ့ဆိုင်မှာ စားကြည့်မလို့ဟာ ၊ စားနေတဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မရှိလို့ မဝင်ခဲ့ရဘူး ။
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်တောင် ၊ အဖေါ် ( သာမီးလေးဒွေ ) တစ်ယောက်မှ မပါလို့ ၊
စိတ်ညစ်နေဒဲ့ဟာ ၊ တစ်ဆိုင်လုံး တစ်ယောက်ထဲတော့ စားဖို့ Feel မလာဝူးရယ် ။
နောက်ပြီး ၊ တောင်ဥက္ကလာ ၊ သစ္စာလမ်းမကြီး ပေါ်က ၊
ထိုင်း Hot Pot + BBQ ဘူဖေး ဆိုင် တစ်ဆိုင် ကိုလဲ သွားစားခဲ့သေးတယ် ။
တစ်ယောက် ၉,၈၀၀ ကျပ် ဆိုတော့ ၊ သူလဲတန်တယ် ပြောရမယ် ။
အဘ က အသားစားခဲ့တာ နဲနဲရယ်ပါ ။
့ကျောက်ကျော နှင့် ကန်စွန်းဥပြုတ် ကို အုန်းနို့ ဆမ်းစားရတဲ့ ၊
ယိုးဒယား အအေး အချိုပွဲ ကိုဘဲ ၊ အဝ တီးခဲ့တယ် ။
ပိန်ဦးမှာ ။ ဟီ ဟိ ။
ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ မြန်မာစာနဲ့ ရှမ်းတရုတ်စာကလွဲရင် ကျန်တာမစားချင်ဘူးးး
ဘိုစာ ဂျပန်စာ မစားချင်ဘူးးး
Alinsett@Maung Thura says: ရန်ကုန်နေတဲ့သူတောင် အဲ့လောက် မသိဘူးရယ်…
.အေးလေ… ဘယ်သိမလဲ.. ကျနော်က အာ့မိုးဆိုင်တွေမှ မစားနိုင်တာကို..
ဒီ ပိုစ့်လေး ဂွတ်တယ်ဗျ။
သူကြီး သတင်းစာမှာ မထည့်ပဲမှ နေပါ့မလား ။
US ကနေ ဗမာပြည်ထဲ အလည်အပတ် ပြန်လာမယ့်သူတွေအတွက် တော်တော် အသုံးဝင်မှာမို့…
ခင်ဇော် says: သတင်းစာထဲ အရင်ပါပြီးလို့ ပို့(စ) တင်တာပါကွီ။
Alinsett@Maung Thura says: .အော…. တိပါပုစ်…
ဒီလထုတ် သဂျီးရဲ့ သတင်းစာ သေချာမဖတ်ရသေးဘူး ။ pdf ဖိုင်ကျတော့လည်း ဒေါင်းရတာ 13 MB လောက်ကိုတောင် တစ်နာရီလောက် ထိုင် ဒေါင်းရတဲ့ နက်လိုင်းစုတ်နဲ့…
လင်ခ့်အတိုင်း သွားဖတ်တော့လည်း ….တော်တော်နဲ့ ပေါ်မလာတာနဲ့…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဟုတ်ဘူးးး
Wow says: ဒီတခေါက်မန်းလေးရောက်ရင် စကောထမင်းစားဖြစ်အောင်သွားစားရမယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: စားနေရင်း နာ့ ကို လွမ်းနော်။
ဝါးမှာတဲ့ ဟို ဘူးလေးတွေ ရပြီ သိလားး
Wow says: ဟင် ဂယ်ရီးလား ကျေးဇူး မွမွ…
SKII ကဒီမာဝယ်ပီးဘီသိလား ပို့နဲ့တော့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: ဝက်သုံးထပ်သား ဂျုံကပ်ကြော်
ရန်ကုန်ပြန်တီးမှနဲ့တူတယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: Credit to Aung Kyaw Moe
2.	၄၈လမ်းထိပ်က မဌေးသန်းအသုတ်လည်းစားချင်တယ်
3.	ခရစ်လမ်းနဲ့အနော်ရထာလမ်းထောင့်မှာအရင်တုန်းကရှိဖူးတဲ့ သမဝါယမရုံးမှာဖွင့်တဲ့ လဘက်ရည်ဆိုင်က ပဲပလာတာကို ပဲသတ်သတ် ပလာတာသတ်သတ်လုပ်ထားတာစားချင်တယ်…..
4.	မဟာဗန္ဒုလ လမ်းက ဘာရတ်မှာ မဆလာတိုရှည်စားချင်တယ်…. .
5.	ကြက်တန်းက ထပ်ခိုးပေါ်မှာတက်စားရတဲ့ ဖက်ခင်းပြီးပဲဟင်းဆန်းပေးတဲ့ ချစ်တီးထမင်းလည်းစားချင်တယ်….
6.	အနော်ရထာလမ်း လမ်းငါးဆယ်မှတ်တိုင်ကုလားဘုရားကျောင်းမှာ ငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းကုလားလေးတွေနဲ့တူတူ အဝတီးရတဲ့ ချစ်တီးထမင်းသတ်သတ်လွတ်လည်းစားချင်တယ်
7.	မနက်စောစောအမေနယ်ကျွေးတဲ့ နန်းကြီးသုတ်ကိုတို့ မြီးရှည်တို့ကို ငယ်ငယ်ကလိုဇလုံကြီးနဲ့စားချင်တယ်… (ဆိုင်ကဟာတွေများ နှစ်လုတ်ဆိုကုန်ပြီဟင့်)
8.	ကန်တော်လေး .. မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်းမပေါ်က ပိတောက်ရိပ်ထမင်းဆိုင်မှာ ဆိတ်ဦးနှောက်နဲ့ ထမင်းစားချင်တယ် ….
9.	၁၉လမ်း ရွှေငါးက ပြီးခဲ့တဲ့လေးနှစ်လောက်က သေသွားတဲ့ အဖိုးကြီးကင်တဲ့ ဘဲကင် အသားကင်အခေါက်ကင်လည်းစားချင်တယ်…..
10.	၃၈လမ်းနဲ့မဟာဗန္ဒုလ လမ်းထိပ်မှာဖွင့်တုန်းက ရောင်းတဲ့ ညိုညို အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကို …. ကြက်အရည်ပြား အသဲအမြစ် အူ …. ငါးဖယ် ဘူးသီးကြော်နဲ့စားချင်တယ် (ခုတော့ထမင်းဆိုင်ဖြစ်သွားပြီ)
11.	ရေကျော် ဈေး ဝင်ပေါက်မျက်စောင်းထိုးမှာရောင်းတဲ့ ဆီထမင်းကို ဂျိုးများများ နှမ်းထောင်းများများထည့်ခိုင်းပြီးစားချင်တယ်
12.	ရေကျော် သီတင်းကျွတ်မှာရောင်းတဲ့ … . ကော်ပြန်စ်ိမ်းနဲ့ ကဏန်းပေါင်းစားချင်တယ်…. ဆိုင်နာမည်မေ့နေပြီ …အဲ့လူကြီးကိုတော့မြင်တာနဲ့မှတ်မိတယ်
13.	ဟိုးအရင် ပုဇွန်တောင်ပန်းခြံရှိတုန်းက ရောင်းတဲ့ … မိဘမေတ္တာ ကဆိတ်ခပတ်နဲ့ …. ကီးမားပလာတာလည်းစားချင်တယ်…… ခုတော့ကြက်တန်းကိုပြောင်းသွားပြီ …ကြော်နေကျကုလားဦးလေးကြီးကဆုံးသွားတော့ သူ့ယောက်ဖကဆက်ရောင်းတယ် သူကြော်သလိုစားမကောင်းတော့ဘူး
14.	၃၇လမ်းထိပ်မှာရောင်းတဲ့ (ခုတေ့ာမရှိတော့ဘူးထင်တယ် ) ဝက်သားဒုတ်ထိုး ဘဲဥအချို ….အူပိတ်လေးလည်းပြန်စားရရင်ကောင်းမယ်
15.	လှည်းတန်းက မြေပဲနှစ်ဆမ်းထားတဲ့ငါးကင်လေးစားချင်လိုက်တာ ရုံးပတီသီးလေးကို ရှမ်းနံနံ အနှစ်နဲ့နယ်ထားတာလေးဘေးမှာပုံ… ချိုချဉ်စပ် သင်္ဘောသီးထောင်းလေးစား…ဘဲဥ ကင်လေးကိုက်
16.	ဦးထွန်းလင်းခြံထိပ်က လက်ဘက်တွန်းလှည်းကဆတ်သားခြောက်ရယ် ပြောင်းဖူးကလေးတစ်ဖူးဝယ်… ငါးကင်ကအသားလေးဖဲ့ သင်္ဘော သီးထောင်းအရည်နဲ့တို့စား စပ်သွားရင် ဟြေင်းဖူးနဲ့ ဆတ်သားခြောက်ဆီစမ်းလေးတစ်ဇွန်းလောက်စား ဟီးဟီး…စားချင်တာ စားချင်တာ ဟြေပါတယ်
17.	၄၂ လမ်းအနဲဘီအီးဆိုင်ကရောင်းတဲ့ ဆိတ်ပဲလေးလည်းသတိယမိသား
18.	ပုဇွန်တောင်ဈေးရှေ့က ကာစင်ဘိုင် ကြက်သားသုတ်
19.	ဝိုင်အမ်ဘီအေ ဘေးက ဝက်ခေါင်းသုတ်
20.	ညောင်တန်းအိမ်ရာမရောကခင်ီ တပ်မြေထိပ် လိပ်ကန်ပန်းခြံမျက်စောင်းထိုးက ဝက်ခြေထောက်ပြုတ်
21.	အာ့လေးလည်း စားချင်တယ်လို့
22.	ဒေါ် မြလေး မုန့်ဟင်းခါးလား…
23.	အင်း ငြုတ်ကောင်းဟင်းကျဲကျဲလေး:-) ….
24.	ပြီးတော့ ရေကျော်ဈေး လမ်းသွယ်ထိပ်က သီးစုံထောပတ်ဘိန်းမုန်
25.	ဗိုလ်ချုပ်လမ်းဖက်ဖူးရောင်က ကျဆိမ့်နဲ့ ဆိတ်ဆွတ်နံပြား
26.	ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနဲ့ ၄၇လမ်းထိပ်က မုန့်တီနဲ့ အသုတ်စုံ …
27.	ပြီးတော့နန်းထိုက်က အသားလုံးခေါက်ဆွဲ….ဟင်းထုတ်……
28.	ခရစ်လမ်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့် က မြေအိုးမြီးရှည်
29.	ပန်းစွယ်တော်က ငါးခူမွကြော်လေးနဲ့ ဝက်စတူးလေးနဲ့ ဝက်ခေါက်ကင်သုတ်လေး နဲ့ တုန်ယမ်းဟင်းချို ချဉ်စပ်ကလေး သောက်ချင်လိုက်တာလို့
30.	ငယ်ငယ်ကလို ရွှေခေါင်းလောင်း က ပေါက်စီဝက်သားပေါင်း …ညှပ်ခေါက်ဆွဲကော်ပြန့်စိမ်း ကိုထမင်းလွတ်စားချင်လိုက်တာ….ရွှေပလ္လင်ကရောင်းတဲ့ ဟာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဝူး … ပြီးတော့ကြက်သားကော်ပြန့်လည်းစားချင်တယ် ….
31.	သံဈေးက ကြက်သားပလာတာလည်းစားချင်တယ် ….
Kaung Kin Pyar says: ခုချိန်ထိ စိတ်တိုင်းမကျနိုင်တဲ့ ကောင်းကင်ပြာရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုထင့်….
ကိုက်လန်ကို ခုထိ ကောင်းကောင်းမကြော်တတ်သေးဘူးရယ်…။ ကြော်လိုက်တိုင်း အိုက်အရိုးတွေက ဒုက္ခပေးတယ်…။
ခင်ဇော် says: ၁) အညွန့်လေးးတေ အရင်သင်
၂) အရွက်နုတေ အရင်ဖြတ်
၃) အရွက်ရင့်တေ အရိုးးအောက်ပိုင်းးကို လှီးးထုတ် လွှင့်ပစ်
၄) ပင်စည်လို တဖြောင့်တည်းးကျန်ချိန် အပေါ် အစိမ်းခွံ ကို လွှာပြီးးခွာ
၅) အတွင်းး ပင်စည်သားး ကို လက်မလောက် ပိုင်းး
၆) အဲဒီ အပိုင်းးကို လေးးစိတ် ဒေါင်လိုက်စိတ်
၇) ဆီ ထည့်, ဆီပူရင် (ကြက်သွန်ဖြူနီထောင်းး ထည့်)ဆားးအရင်ထည့်
၆) ပြီးးရင် သင်ထားးတဲ့ အရိုးးထည့်ကြော်
၇) နူးးမှ အညွန့်နဲ့ အရွက်နု ထည့်ကြော်
၈) ရေထွက်ပြီးး ခန်းးလောက်မှ ခရုဆီထည့်
အဲ.. မသင်ခင်ရေဆေး, လက်ရောဆေးး
ရေဆေးပြီးး ဒါးးနဲ့ သင်
Ma Ma says: မန်းလေးသူမို့ မန်းစာပိုကျွမ်းတယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးလိုက်မယ်။
ဒီမှာတော့ ချန်နယ်ဆဲဗင်းက သွားမယ်စားမယ်ကဏ္ဍမှာ ဆိုင်သစ်တွေ စားကောင်းတာတွေညွှန်းတာရှိတယ်။
ဈေးလည်းတန် စားလို့လည်း ကောင်းတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: မမရေ။
ရန်ကုန်က မကျွမ်းတဲ့ အပြင် စားရတာ စိတ်အေးလက်အေးလည်း မရှိခဲ့ဘူးးး
တဂျီးကဆောင်းပါးလိုချင်တယ်ပြောမှ လိပ်စာတွေ ကိုဘလက်တို့ ကိုမတ်တို့ကို ပြန်မေးရတာ။
ကျနော် ဘယ်လိုစားပြီး ဘယ်လောက်စားခဲ့မိလည်း မမှတ်မိဘူးးး
မန်းလေးကတော့ ကိုယ့်ပိုင်နက်မို့ စိတ်အေးတယ်။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: FB ပရိုဖိုင်ပုံမှာ ၀ိတ်တက်လာရတဲ့အကြောင်းအရင်း။
ခင်ဇော် says: အာ့ပြောတာပေါ့။
ခုမှ စု ဝ လာတာ
naywoon ni says: ဒီ​နေ့ည အိမ်​မှာ ဟင်းမ​ကောင်းပါဘူးဆိုမှ ဒီပိုစ့်​နဲ့ တည့်​တည့်​ တိုးရတယ်​လို့ ဟင်းးးး ငါရှင်​ချင်​တယ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: သများကတော့
ဟင်းမကောင်းတိုင်း အစားအသောက်ပေ့(ချ) တွေ ဝင်ကြည့်ပြီး ထမင်းဆိုင် အတွက်စဉ်းစားတယ်.
Mr. MarGa says: ကုက္ကိုကျွန်းမှာ စားချင်တယ်
တွေးထားပြီး ဘယ်တော့မှ မရောက်
ခင်ဇော် says: 12 Pana လည်း နေရာထိုင်ခင်းကောင်းတယ်။
Courage says: ပြန်ရောက်ရင် အကုန်သွားစာဦးမယ်။
ခင်ဇော် says: ကို ကာကြီး အတွက် ဒကာမ ရှာပေးမယ်။
Ma Ei says: တောင်ဥက္ကလာ စာတိုက်လမ်းဆုံ ရဲစခန်းနားက Feel က သူများအိမ်နဲ့ ကျောကပ် မျက်စောင်းထိုးရယ်…
လာတုံးကလဲ တစ်ရပ်ကွက်ထဲနေတာတဲ့ နီးနီးလေးနဲ့ ဝေးနေရတာ…
black chaw says: ထုံးစံအတိုင်းပေါ့အေ…။
ဒီတစ်ခါ လာရင် ဆိုင်စုံအောင် လိုက်ပို့ပေး…ဦး…မှာ…။
ခင်ဇော် says: ပုံပြင် ပြောပြန်ပြီ။